किन पढ्दैनन् केटाकेटी ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण किन पढ्दैनन् केटाकेटी ?
विश्वभरि नै विद्यालय शिक्षा हात्ती, बाँदर, सर्प, माछा सबैलाई रुख चढ्न सिकाउने खालको छ । बाघले रुख चढ्न सक्यो भनेर माछालाई बिल्ला हाने के होला ?
ए पढ् खै पढेको ? धेरै जसो अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई भन्ने वाक्य हो यो । अझ कोही त तैंले यति ग्रेड ल्याइस् भने जे भन्छस् त्यही किनिदिउँला भनेर छोराछोरीलाई फुर्क्याउन खोज्छन् । शिक्षकको गुनासो उस्तै छ : आजभोलि विद्यार्थी मरे पढ्दैनन् । ग्रेडिङ सिस्टमले त विद्यार्थी खत्तमै पार्‍यो । विद्यार्थीको आफ्नै गुनासो छ : घरमा पनि किचकिच, स्कुलमा पनि किचकिच । जति पढे पनि यस्तै हो ।
विद्यालय शिक्षाको समस्याको चुरो यहीँनेर छ र समाधान पनि । समस्या के हो त ? समस्या को हो त ? अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, सरकार कि व्यवस्थापन ? समस्या सबैको हो र सबैसँग छ पनि । सिकाइ विद्यार्थीसँग सम्बन्धित छ, तर त्यसलाई सहयोग गर्छन् शिक्षकले । शिक्षकप्रति विद्यार्थीको हेराइ जति सकारात्मक हुन्छ, त्यति सिकाइ सहज हुन्छ । ‘मलाई फलानो म्याम क्या मन पर्छ’ भन्छन् कुनै विद्यार्थी । त्यही म्यामको होम वर्क छुटाएकै हुन्नन्, अक्षर पनि राम्रो हुन्छ र परीक्षा पनि त्यही म्यामको विषयमा चाहिँ राम्रो गर्छन् । ‘मलाई फलानो शिक्षक मन पर्दैन’ भन्ने विद्यार्थी त्यही शिक्षकको कक्षामा उच्छृंखल हुन्छ । त्यही शिक्षकको गृहकार्य गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, शिक्षकले पढाएको पनि उसले राम्ररी बुझ्दैन । अब समस्या शिक्षकको कि विद्यार्थी को ? विद्यार्थीलाई विषय मन परे शिक्षक मन परेको कि शिक्षक मन परेर विषय मन परेको ? तर एउटा कुरा स्पष्ट छ : मन पर्नु र नपर्नुले सिकाइ र अध्ययनमा बलियो प्रभाव पार्छ ।
विश्वभरि नै विद्यालय शिक्षा हात्ती, बाँदर, सर्प, माछा सबैलाई रुख चढ्न सिकाउने खालको छ । गायक बन्ने सपना देखेको र मनभरि गीतसंगीत बोकेको विद्यार्थीले हिसाबका कठिन सूत्रमा मन कसरी लगाउन सक्ला ? नाच्नमा प्रथम हुने विद्यार्थी पढाइमा प्रथम हुनैपर्छ वा अब्बल हुनैपर्छ भनेर दबाव दिएपछि उसको नाता सिकाइ र पढाइसँग जोडिएला कि नजोडिएला ? अभिभावकले सन्तान चिन्नुपर्छ । बाघले रुख चढ्न सक्यो भनेर माछालाई बिल्ला हाने के होला ? अन्तप्र्रेरणा र अन्तर्चेतनाले व्यक्ति बाटो तय गर्छ । विद्यार्थी पनि त्यस्तै हो । तर यी दुवै कुराको निर्माण कसरी हुन्छ त ? कसैले फुत्त हालिदिन सक्दैन । यो अभ्यास हो, साधना हो । बाहिरबाट कसैले केही हालिदिने र केही आफैले आफूभित्र विकास गराउने हो । यी दुवै तत्व अत्यन्त कोमल हुन्छन् । सानो हावाहुरीले पनि उखेलिदिन सक्छ, हाँगा भाँचिदिन सक्छ । त्यसलाई सबै मिलेर मलजल र गोडमेल गरिरहनुपर्छ । क्यान्सरकोषिका जस्तै बीचबीचमा अनावश्यक बानी, गलत सिकाइ सम्पर्क वा मित्रता पलाउन सक्छ । तिनलाई बेलैमा चिन्न सके हटाउन सके अन्तप्र्रेरणा र अन्तर्चेतना बानी बनेर बस्छ । यही बानी नै बलियोसँग बस्न सक्यो भने चरित्र बन्छ । यस्ता विद्यार्थीलाई पढ् भन्नुपर्दैन, शिक्षकले नपढाए पनि आफै खोजेर पढ्न थाल्छन् । ती जिज्ञासु हुन्छन्, आफैं खोज्छन्, बाटो तय गर्छन् ।
छोराछोरीलाई पढ् पढ् भनेर कराउने बाबुआमाले पढ्ने बानी कसरी बसालिदिन सक्छन् त ? एकपटक मसँग एक जना अभिभावकले गुनासो गरे, ‘मेरो बच्चा पढ्दै पढ्दैन । कि मोबाइलमा कि त टिभीमा हुन्छ । पढ् भन्यो भने ढोका ठ्याम्म थुनेर बस्छ ।’ तपाईं चाहिँ कत्तिको पढ्नुहुन्छ नि ? मेरो प्रश्नमा अभिभावक जिल्ल ! कलेज जान छाडेपछि ती अभिभावकले कुनै किताब पढेकै रहेनछन् । तपाई आफै केही पढ्नुहुन्न अनि बच्चाले के सिक्छ त ? धेरै अभिभावकको सोचाइ पढ्नु भनेको पाठ्यपुस्तक पढ्नु, गृहकार्य गर्नु र परीक्षामा नम्बर ल्याउनुमात्रै हो भन्ने छ । त्यति गर्न त परीक्षामा आँखा घुमाए पनि सकिन्छ । पढ्नुको अर्थ नै सही नभएपछि पढ्न पो किन प¥यो र ? अभिभावकले पनि पढ्ने बानी गर्नुपर्छ । आफूले मन पराएको किताब÷लेखबारे केटाकेटीसँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ । आमाबाबुले कुनै किताबको बारेमा चर्चा गरेपछि उसलाई पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भोक जाग्न सक्छ । बच्चाको सोचाइ परिवेशले निर्धारण गर्छ । परिवेश अभिभावले बनाइदिनुपर्छ । आफू साथीभाइसँग रत्तिने, घरमा मोबाइलमा झुत्तिने अनि केटाकेटीले पढेनन् भनेर कराउने ? नपढ्ने बनाउने त अभिभावकले नै हुन् ।
विद्यालयमा शिक्षक/शिक्षिकाबाट विद्यार्थी प्रभावित हुन्छन् । कोर्सभन्दा बाहिरका विभिन्न विषयवस्तुबाट थोरै जानकारी दिने, आफूले पढेको किताब/लेखको आसय भनिदिने, तिमीहरुले के पढेका छौ ? भनेर सोधेर पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । कोर्सका विषयवस्तुका सीमा हुन्छन्, तिनले जीवनका धेरै कुरा सिकाउँदैनन् । त्यसैले ती नीरस पनि हुन्छन् । व्यावहारिकभन्दा सिद्धान्त बढी हुन्छ, मूर्तभन्दा अमूर्त कुरा बढी हुन्छ । त्यस्तोमा विद्यार्थीलाई रसिला र सरल भाषशैलीमा लेखिएका किताब पढ्न प्रेरित गर्न सके अध्ययन गर्ने बानी बस्छ । कतिपय अभिभावक त कोर्सभन्दा बाहिरको पुस्तक पढ्न लगाएकोमा रिसाउँछन् पनि । नम्बर र परीक्षाको घेराबाट शिक्षालाई बाहिर ननिकाल्ने हो भने हाम्रो शिक्षा झनै यान्त्रिक र बोझ बन्दै जान्छ । कोर्सभन्दा बाहिरका पुस्तक पढ्ने विद्यार्थीले परीक्षामा कम अंक ल्याउलान्, तर ती भविष्यमा अब्बल विद्यार्थी बन्नेछन् ।
मोबाइल, टिभी र इन्टरनेटले विद्यार्थीलाई नपढने बनाएको छ भन्ने धेरेको भनाइ पाइन्छ । यी तीनओटै कुरा सूचना र जानकारीका लागि वरदान हुन् । यिनले पढाइलाई बिगार्दैनन्, बरु सपार्छन् । यी चीज नहुँदा पनि नपढ्ने विद्यार्थी थिए । गुच्चा खेल्थे, बन्क गरेर सिनेमा हल पुग्थे । कक्षामै बसे पनि सिकाइ शून्य हुन्थ्यो । वस्तुमा खराबी होइन, केटाकेटीलाई सही तरिका र सही कुरा सिकाउन नसक्नु खराबी हो । अभिभावक भन्छन्, स्कुलले सिकाउनुपर्छ । शिक्षक भन्छन्, अभिभावकले नै सही बानी बसालिदिएका छैनन् । जिम्मेवारी दुवैको हो, मिलेर काम गरे बच्चामा धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । तर एकअर्कालाई आरोप लगाएर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बढेको हो ।
मोबाइलले केटाकेटी बिग्रन्छन् भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु । मोबाइलले गर्दा खेल्न मन नपराउने साथी वा परिवारका सदस्यहरुसँग समय विताउन नमान्ने एक्लै बसेर मोबाइलमा समय विताउने गर्नाले । एकातिर प्रयाप्त शारीरिक कृयाकलाप नगर्नाले स्वाश्थ्य राम्रो नहुने र समाजमा घुलमिल हुन नचाहने संचारसिपको विकास नहुने समस्या बढेको देख्छु ।
बाल मनाेविज्ञान बुझेर नानीहरूलाई शिक्षण सिकाईमा घरबाटै पनि अध्ययान गर्ने वातावरण सृजना गराउन सके धेरै राम्रो हुने छ ।यहाँ हाम्राे नेपाली समाजमा धेरै भन्दा धेरै शिक्षकहरूलाई मात्र अाराेप लगाउछाै ।अभिभावक हरूले नै अाफ्नाे भुमिका निर्वहा गर्नु नसक्नु, नै मुल कारण हाे ।